I-Spoutable: Iintengiso zaMakhaya eziNdwendwela abahambi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 5, 2016 NgoMvulo, Matshi 7, 2016 Douglas Karr
Ukuba ungumpapashi, ukwenza imali kubaphulaphuli bakho kuhlala kungumngeni-ngakumbi ukuba ukwisiza solwazi. Ukubonisa intengiso ngokungaziwayo xa usithelekisa nezinye iindlela zentengiso, ke abapapashi baphulukana neentengiso ezijolise kuzo ekuqhubeni nasekukhangeleni. Intengiso yemveli ifikile njengendlela yokuqhuba ingeniso yabapapashi- kodwa ndibhale ngaphambili ukuba inokuza ngendleko kwintembeko yohlobo.
Iyasasazeka inokuba nesisombululo esifanelekileyo -kwaye besivavanya kanye apha Martech Zone. Kunye neentengiso ezisebenza ngaphakathi kumxholo (onokuba yicicky), banikezela nge injongo yokuphuma Isisombululo sihle kakhulu. Xa umntu elungiselela ukushiya indawo yakho, intle ukulala ngaphezulu Iphaneli ibonakala enika ezinye iindlela kumsebenzisi. Kwindawo yethu, iphaneli ivelisa amanqaku asibhozo alungiselelwe abaphulaphuli bethu.
I-Spoutable ibonelela ngoluhlu lwezinye iindawo ezisebenza zombini kwidesktop nakwiselfowuni:
Ndiyasithanda esi sisombululo kuba asiphazamisi umsebenzisi obandakanyekayo onwabele indawo yethu. Kuboniswa kuphela kumsebenzisi owayesele ephuma kwindawo leyo. Bobabini abathengisi kunye nabapapashi banokujonga inkcitho yabo ngexesha lokwenyani.
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Iyasasazeka.
tags: injongo yokuphumaPhuma ngaphezuluzi ntengisointengiso yemveliukulala ngaphezuluspoutable
Sep 25, 2017 ngo-6: 04 PM
Bane-cpm eyothusayo ngenene yabapapashi. Kwaye uninzi olusebenzisa iibhlokhi zentengiso aluzange lubone ukuphuma kwentengiso.